Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka ee Columbus, Kooxda Takhasuska Kalkaaliyaha Caafimaadka ee OH
Kooxda Takhasuska Kalkaalisada Caafimaadka
La kulan Khabiirada Kalkaalisada Caafimaadka
Khabiirada kalkaaliyaha caafimaad waxay bixiyaan baaritaanka, daaweynta, iyo maaraynta joogtada ah ee bukaanka. Waxay sidoo kale siiyaan khibrad iyo taageero kalkaaliyayaasha daryeelaya bukaanka jiifka sariirta, waxay gacan ka geysanayaan wadida isbadalka ku dhaca guud ahaan ururka, iyo hubinta isticmaalka dhaqamada ugu wanaagsan iyo daryeelka ku saleysan cadeynta si loo gaaro natiijada ugu wanaagsan ee bukaan socodka.
Khabiirada kalkaalisooyinka caafimaadka waxay leeyihiin xirfado iyo khibrad ay ku aqoonsadaan halka ay ka banaan yihiin bixinta daryeelka caafimaadka. Waxay kaa caawin karaan naqshadeynta iyo hirgelinta waxqabadyada, iyo qiimeynta iyo qiimeynta kuwa si loo wanaajiyo guud ahaan bixinta daryeelka caafimaadka.
Karen waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Ohio State University oo ay ku qaadatay BA ee Saxaafadda markii hore waxayna si dhakhso leh u heshay inay u jihaysato daryeelka caafimaadka iyo qaybta kalkaalinta. Waxay ka qalin jabisay Columbus State Community College oo ay ku qaadatay AD oo ku xeel dheer kalkaalinta caafimaadka waxayna usii gudubtay jaamacada Capital oo ay ka heshay BSN. Waxay khibrad u leedahay wadnaha furan iyo foosha & gaarsiinta, iyadoo in ka badan 11 sano ku qaadatay Riverside Methodist iyo Dublin Methodist Hospitals. Karen waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Capital iyada oo kasbatay MSN-CNS iyada oo xoogga la saaray Caafimaadka Haweenka ee 2019. Kahor inta aysan ku biirin PWH ee 2019, Karen waxaa kahelay bixiyeyaasha PWH inta lagu gudajiray barnaamijkeedii Master-ka, oo bixinaysay imtixaanno sanadle ah, daryeelka uurka, latalinta ka hortagga uurka, latalinta bacriminta, maaraynta caadada iyo guud ahaan kor u qaadista caafimaadka haweenka.
Karen had iyo jeer waxay daawaneysaa Buckeyes sidoo kale waxay isku dayeysaa inay caafimaad qabto oo ay la socoto carruurteeda. Asal ahaan waxay ka yimaadeen Bainbridge, Ohio, Karen iyo ninkeeda Matt waxay hada degan yihiin New Albany iyaga iyo caruurtooda Connor, Lauren iyo Isabella.
Kalkaaliyeyaasheena kalkaaliye caafimaad (CNS) waxay leeyihiin tababar heer sare ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka haweenka waxayna ka caawiyaan kooxdeena daaweynta iyo maaraynta baahiyaha OB / GYN.
Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville